Baarlamaanka oo dood kadib gudiga dastuurka ansixiyay | KEYDMEDIA ONLINE
Baarlamaanka oo dood kadib gudiga dastuurka ansixiyay
Muqdisho(keydmedia) Xildhibaan Baarlamaanka KMG ah ayaa maanta dood kadib isla gartay inuu shaqeeyo gudiga dastuurka isla markaana tiradiisa la kordhiyo.
Kulanka oo uu shirgudoominayay ku simaha gudoomiyaha C.wali Muudeey ayaa waxaa lagu ansixiyay laba qodob oo kala ahaa kordinta tirada xubnaha gudiga dastuurka oo la gaarsiiyay 30 qof iyo waliba hosha gudigaasi sharciyadeeda.
Xubin ka tirsan gudiga oo ka hadashay madasha baarlamaanka ayaa shaaca ka qaaday in galaan gal xoog leh ay ku leeyihiin hey’ado shisheeye arinta dastuurka Soomaaliya, waxaana uu hoosta ka xariiqay in mudadii ay ku shaqeynayeen dalalka dibadda ay talooyin iyo go’aano ku lahaayeen dastuurka hey’ado ajnabi ah.
Xildhibaanada Baarlamaanka kama aanay doodin kaalinta hey’adahaasi ay ku leeyihiin fara galinta Soomaaliya waxaana ay cod gacantaag ah ku sheegeen in gudiga uu ansax yahay howshiisana uu wadan karo.
Madaxweyne Shariif ayaa dhawaan ka dalbaday gudiga in dastuurka sameyntiisa ay dadajiyaan si loo wajaho arimaha cakiran ee dalka iminka ka taagan, dhanka kale R.wasaare farmaajo ayaa uga digay gudigaasi in ay sameeyaan dastuur shacabka dhibaateynaya.
Qabya qoraalka dastuurka ee dhawaantan la bandhigay ayaa sida aqoonyahano badan ay sheegeen waxaa ku jira qaladaad iyo qodobo aanay soomaalidu la jaan qaadi Karin.